ညို့အားပြင်းပြင်း နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ အဆမ တန်ပိုနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ – Askstyle
ညို့အားပြင်းပြင်း နဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ အဆမ တန်ပိုနေတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ
သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္လို႔ ဆိုလိုက္တာ နဲ႔ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေကာက္ေၾကာင္း အလွနဲ႔ ပုရိသေတြကိုဖမ္းစားထားတဲ့ မိန္းမလွေလးဆိုတာ အားလုံးကသိၿပီးသားျဖစ္ၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ဆက္စီ ဆန္ဆန္ဖက္ရွင္ေတြနဲ႔ ပြဲတက္ေလ့ရွိတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က ပရိသတ္ေတြကို ဟာခနဲဟင္ ခနဲျဖစ္ေအာင္ ညိဳ႕ယူထားႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ဆိုတာ နဲ႔ အားလုံးက စိတ္ဝင္တစားေစာင့္ၾကည့္ေနရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔တစ္မ်ိဳးမ႐ိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပရိသတ္ေတြကို ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြ အျပည့္အဝေပးေလ့ ရွိတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က အခုလည္း အမိုက္စားပုံရိပ္ေတြကို တင္ထားပါတယ္။ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္က သူမရဲ႕ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့အလွေတြကိုေပၚလြင္ေအာင္ ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ပုံရိပ္ေလးေတြကို အသစ္ တင္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဇာက ” Which one do u want to prefer? ဆိုၿပီးလည္း ပရိသတ္ေတြကို ေမးခြန္းေလးထုတ္ထားပါေသးတယ္။
သင္ဇာက စူးရွေတာက္ပတဲ့ မ်က္ဝန္းေလးေတြ နဲ႔အတူ မတူညီတဲ့မ်က္ႏွာ အမူအရာမ်ိဳးစုံနဲ႔ ပရိသတ္ေတြ ကို အသည္းတယားယားျဖစ္ေအာင္လုပ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ညိဳ႕အားျပင္းလြန္းတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ပုံရိပ္ေတြကေတာ့ ဆြဲေဆာင္မႈေတြ အဆမတန္ပိုေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ ခ်စ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ မင္းသမီးေခ်ာေလး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ အမိုက္စားပုံရိပ္အသစ္ေတြကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
သင်ဇာဝင့်ကျော်လို့ ဆိုလိုက်တာ နဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှနဲ့ ပုရိသတွေကိုဖမ်းစားထားတဲ့ မိန်းမလှလေးဆိုတာ အားလုံးကသိပြီးသားဖြစ်ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆက်စီ ဆန်ဆန်ဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပွဲတက်လေ့ရှိတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က ပရိသတ်တွေကို ဟာခနဲဟင် ခနဲဖြစ်အောင် ညို့ယူထားနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်ဆိုတာ နဲ့ အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးနိုင်လောက်အောင် ပရိသတ်တွေကို ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ အပြည့်အဝပေးလေ့ ရှိတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်က အခုလည်း အမိုက်စားပုံရိပ်တွေကို တင်ထားပါတယ်။ သင်ဇာဝင့်ကျော်က သူမရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတွေကိုပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကို အသစ် တင်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဇာက ” Which one do u want to prefer? ဆိုပြီးလည်း ပရိသတ်တွေကို မေးခွန်းလေးထုတ်ထားပါသေးတယ်။
သင်ဇာက စူးရှတောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေ နဲ့အတူ မတူညီတဲ့မျက်နှာ အမူအရာမျိုးစုံနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကို အသည်းတယားယားဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ညို့အားပြင်းလွန်းတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ အဆမတန်ပိုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အမိုက်စားပုံရိပ်အသစ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။